Duqa Muqdisho oo digniin kasoo saaray Kooxaha dhaca geysta | Allbalcad Online
Home WARARKA Duqa Muqdisho oo digniin kasoo saaray Kooxaha dhaca geysta
Duqa Muqdisho oo digniin kasoo saaray Kooxaha dhaca geysta
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir Ahna Duqa Magaalada Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed (Cumar Filish) ayaa kormeer ku tagay deegaanka Jasiira ee duleedka Muqdisho halkaasi oo isku dhac uu ku dhex maray Ciidamo ka tirsan Booliska Soomaaliya iyo kooxo halkaasi ka waday dhibaateynta Shacabka.
Duqa Muqdisho oo ay wehliyeen Saraakiil ka tirsan Ciidanka Booliska iyo Milatiriga Soomaaliya, ayaa waxa uu laamaha Amniga kaga Mahadceliyay sida ay ugu dhiidhiyeen in deegaankaasi lagu dhibaateeyo shacabka oo dhac loogu geysto, Asigoona sheegay in aan marnaba la aqbali doonin dhibaateynta Shacabka.
Waxa uu ugu baaqay shacabka qeybahooda kala gedisan in ay la shaqeeyaan Laamaha Amaanka si loogu guuleysto kooxaha u jooga dhibaateynta Shacabka.
Degaanka Jasiira ayaa waxaa Maalin walba u dalxiis taga Boqolaal Ruux oo ka tegay Caasimadda Soomaaliya ee Magaalada Muqdisho, waxaana mararka qaar ay la kulmaan Kooxo hubeysan oo dhac u geysanaya.
Previous articleAl-Shabaab oo Carruur farabadan ka afduubatay Mozambique
Next articleGuddiga Farsamada Doorashooyinka oo kulankoodii ugu horeeyay yeeshay (Sawiro)